Migrant Education Program | Equity & Engagement
Identify, recruit and support migrant families by providing services that effectively allow them to achieve their educational goals.
Services may vary from one school or district to another depending upon the number of students identified and their needs. Direct services include, but are not limited to:
Referrals to food banks, clothing banks, low cost medical services and clinics, GED classes, citizenship classes, adult education, legal services and other community agencies.
Assistance with summer school enrollment and tuition.
Transfer of student records to and from Mexico through the Bi-national Program.
Scholarship assistance for outstanding migrant students.
Youth guidance and education support.
Supplemental instructional services.
တၢ်ဆဲးကျိး ဒီးတၢ်ရ့လိာ်မၤသကိး »
Step 1: Find out if the student or family meets the below eligibility requirements
Migrant students are children (from birth through age 21) of parents or guardians who have moved across state or school district lines anytime during the past three years to seek or with the intent to obtain temporary or seasonal employment in agriculture, fishing or related industries.
Children can qualify even if their parents did not find the job they were looking for or if they have since changed jobs. Families may be eligible for free supplemental educational services based upon previous work in the following activities:
Vegetables, fruits, seeds (including canning and packing)
Farm, ranch (including dairy and sod)
Meat packing plant, slaughter house
Poultry, egg plant
Christmas tree processing, forestry
Students qualify for three years from the last qualifying move. Every time the family moves across school district boundaries to look forajob in agriculture, the children re-qualify.
Step 2: Identify or recruitastudent or family
To identifyafamily for the MEP at DPS, complete this form at registration or call 303-365-5817 to see ifastudent is eligible. Onceastudent has confirmed eligibility,amigrant liaison from DPS will reach out to the family to offer services and student mentorship.
Onceastudent has confirmed eligibility,amigrant liaison from DPS will reach out to the family to offer services and student mentorship. DPS families are recruited from the Migrant Education Program (MEP) through the State of Colorado. Here is an overview of MEP recruitment.
Federal Programs Supportive Services Form »
Formulario de servicios de apoyo de programas federales »
Resources for our students, parents and families
Parents can be nominated to becomeamember ofaParent Advisory Council or PAC. Here is an overview ofaPAC according to the State of Colorado.
Opportunities include: MYLI, SMYLI, Close Up and Migrant-Stem Academy, and students can be signed up by their DPS MEP liaison. Check out the State of Colorado’s overview of migrant events.
Colorado Department of Labor and Employment »
Colorado Farm Workers »
Migrant Education Resources »
National Center for Farm Worker Health »
Pesticide Report »
United Farm Workers of America »
African Community Center »
Denver University Refugee Services »
Project Worthmore »
Thrive Center »
Metro Migrant Education Program Office
14707 E. 2nd Avenue, Ste 180
201 East Colfax, Room 401
Identificar, contactar y brindar apoyoalas familias inmigrantes al ofrecerles servicios que les permitirán alcanzar sus objetivos educativos.
Los servicios pueden variar de una escuela o un distritoaotro, dependiendo del número de estudiantes y de sus necesidades. Los servicios directos pueden incluir, entre otros:
remisionesabancos de alimentos y ropa, servicios médicos y clínicas de bajo coste, clases para la preparación del Diploma Equivalente de Educación Preparatoria (GED) y para la ciudadanía, formación para adultos, servicios jurídicos y otras organizaciones comunitarias;
ayuda con la inscripción y la colegiatura de la escuela de verano;
traspaso de expedientes estudiantiles de Estados UnidosaMéxico y viceversaatravés del Programa binacional;
becas para estudiantes inmigrantes con calificaciones excepcionales;
orientación para jóvenes y apoyoala formación escolar;
Paso 1: averiguar si el estudiante o la familia cumplen con los requisitos que se indicanacontinuación:
los estudiantes inmigrantes son los niños, desde su nacimiento y hasta los 21 años, cuyos padres o tutores legales se han mudado de estado o de distrito escolar en cualquier momento durante los últimos tres años para trabajar o con la intención de encontrar trabajo temporal o zafral en los sectores agrícolas, de la pesca o relacionados.
Los niños pueden ser elegibles incluso si sus padres no encontraron el trabajo que estaban buscando o si desde entonces han cambiado de empleo. Las familias pueden ser elegibles para recibir servicios educativos suplementarios de forma gratuita si han trabajado previamente en las siguientes actividades:
verduras, frutas, semillas (incluido enlatado y empacado)
granja, hacienda (incluidos lácteos y pasturas)
planta de envasado de carne, matadero
planta de aves o huevos
procesamiento de árboles de Navidad, industria forestal
Los estudiantes pueden cumplir con los requisitos hasta tres años después de la última mudanza elegible. Cada vez que la familia se mude dentro de los límites del Distrito por búsqueda de trabajo en el sector de la agricultura, se considera que los niños cumplen con los requisitos automáticamente.
Paso 2: identificar o inscribiraun estudiante oauna familia
Para identificarauna familia como parte del MEP en DPS, complete este formulario o llame al 303-365-5817 para comprobar si el estudiante cumple con los requisitos. Tras comprobar la elegibilidad del estudiante, una persona de enlace de DPS especializada en inmigración se comunicará con la familia para informar sobre los servicios disponibles y ofrecer mentorías para el estudiante.
Tras comprobar la elegibilidad del estudiante, una persona de enlace de DPS especializada en inmigración se comunicará con la familia para informar sobre los servicios disponibles y ofrecer mentorías para el estudiante. Las familias de DPS pertenecen al Programa de educación para inmigrantes (MEP) del Estado de Colorado. Aquí encontrará un resumen del proceso de inscripción del MEP.
Formulario del Programa federal de servicios de (inglés) apoyo »
Recursos para nuestros estudiantes, sus padres y familias
Los padres y madres pueden ser nominados para formar parte del Comité Asesor de Padres (PAC). Aquí encontrará información sobre el PAC del Estado de Colorado.
Algunos de los eventos son los siguientes: MYLI, SMYLI, Close Up y la academia Migrant-Stem Academy. Los estudiantes pueden inscribirse poniéndose en contacto con la persona de enlace del MEP de DPS. Consulte el listado de eventos para estudiantes inmigrantes del Estado de Colorado.
Departamento de Educación de Colorado »
Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado »
Trabajadores Agrícolas de Colorado »
Recursos educativos para inmigrantes »
Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas »
Informe sobre pesticidas »
Unión de Campesinos de América »
Centro comunitario African Community Center »
Biblioteca Pública de Denver »
Servicios para refugiados de la Universidad de Denver »
Proyecto Worthmore »
Centro Thrive »
Programa de educación para inmigrantes. Oficina de la región metropolitana
Programa de educación para inmigrantes de Colorado
ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ားအား ၎တို႔၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရယူႏိုင္ေစရန္ ထိေရာက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ လူသစ္ေခၚယူရန္ ႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္။
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရႏွင့္ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တစ္ေက်ာင္းႏွင့္ တစ္ေက်ာင္း (သို႔) ေက်ာင္းခရိုင္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ တိုက္ရိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ကန္႔သတ္မထားပါ–
အစားအေသာက္ စုပံုသည့္ေနရာမ်ား၊ အဝတ္အထည္ စုပံုသည့္ေနရာမ်ား၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေသာ ေဆးကုသေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား၊ GED အတန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသား အသိပညာသင္တန္းမ်ား၊ လူႀကီးမ်ားအတြက္ ပညာေရး၊ ဥပေဒေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားအသိုင္းအဝိုင္း ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ ရည္ညႊန္းေပးျခင္းမ်ား။
ေႏြရာသီေက်ာင္း စာရင္းသြင္းမႈႏွင့္ က်ဴရွင္အတြက္ အကူအညီ။
ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းမႈ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ားကို မက္ဆီကို ႏွင့္ အသြားအျပန္ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း။
ထူးခၽြန္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု အကူအညီ။
လူငယ္ လမ္းညႊန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ ႏွင့္ ပညာေရး ပံ့ပိုးမႈ။
အပို သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။
အဆက္အသြယ္ ႏွင့္ တည္ေနရာမ်ား »
အဆင့္ ၁– ေက်ာင္းသား (သို႔) မိသားစုသည္ ေအာက္ပါအက်ံဴးဝင္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိကို ၾကည့္ပါ
ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ား (ေမြးစမွ အသက္ ၂၁ ႏွစ္) ဆိုသည္မွာ ယာယီ (သို႔) ရာသီအလိုက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ (သို႔) ယင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္အတြင္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ (သို႔) ေက်ာင္းခရိုင္ နယ္ပယ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ေသာ မိဘမ်ား (သို႔) အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ထိုမိဘမ်ားသည္ အလုပ္ေျပာင္းရန္ ရွာေဖြေနေသာ အလုပ္ကို မရရွိလွ်င္ေတာင္မွ ကေလးမ်ားသည္ အက်ံဴးဝင္မႈ ျပည့္မီပါသည္။ မိသားစုမ်ားသည္ ယခင္ကလုပ္ခဲ့ေသာ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္ေပၚမူတည္၍ အပိုေပးကမ္းေသာ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အက်ံဴးဝင္ႏိုင္ပါသည္–
ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသီးအႏွံ၊ အေစ့မ်ား (စည္သြပ္ဘူး ႏွင့္ ထုပ္ပိုးျခင္းလုပ္ငန္း အပါအဝင္)
စိုက္ပ်ိဳး/ေမြးျမဴေရးျခံ (ျမက္ခင္းေျမလႊာႏွင့္ ႏုိ႔ထြက္လုပ္ငန္း)
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးအက်ံဴးဝင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ သံုးႏွစ္အထိ အက်ံဴးဝင္ပါသည္။ မိသားစုတစ္စုသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အလုပ္တစ္ခုကို ရွာေဖြရန္ ေက်ာင္းခရိုင္ နယ္နမိတ္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းတိုင္း သူတို႔၏သားသမီးမ်ားသည္ အက်ံဴးဝင္မႈကို ျပန္လည္ရရွိသည္။
အဆင့္ ၂ – ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ (သို႔) မိသားစုတစ္စုကို သတ္မွတ္ရန္ (သို႔) အသစ္ေခၚယူရန္
DPS ရွိ MEP အတြက္ မိသားစုတစ္စုကို သတ္မွတ္ရန္ စာရင္းသြင္းမႈတြင္ရွိေသာ ဤပံုစံကိုျဖည့္ပါ (သို႔) ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အက်ံဴးဝင္မႈကို သိရွိရန္ ၃၀၃–၃၆၅–၅၈၁၇ ထံေခၚဆိုပါ။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ အက်ံဴးဝင္မႈကို အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ DPS မွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးသူတစ္ဦးက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားလမ္းညႊန္ျပသမႈအတြက္ ထိုမိသားစုထံ ဆက္သြယ္ပါမည္။
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ အက်ံဴးဝင္မႈကို အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ DPS မွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးသူတစ္ဦးက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားလမ္းညႊန္ျပသမႈအတြက္ ထိုမိသားစုထံ ဆက္သြယ္ပါမည္။ DPS မိသားစုမ်ားကို Colorado ျပည္နယ္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ပညာေရး အစီအစဥ္ (MEP) မွ လူသစ္ေခၚယူပါသည္။ MEP လူသစ္ေခၚယူျခင္း၏ ျခံဳငံုမႈတစ္ခု ကိုဤေနရာတြင္ၾကည့္ပါ။
ဖက္ဒရယ္ အစီအစဥ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံုစံ »
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား
မိဘမ်ားအား မိဘအၾကံေပး ေကာ္မီတီ (သို႔) PAC ၏ အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္လာရန္ အဆိုျပဳႏိုင္ပါသည္။ Colorado ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ PAC ျခံဳငံုမႈတစ္ခုကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္ပါ။
ပါဝင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား– MYLI, SMYLI, Close Up (အက်ယ္တဝင့္) ႏွင့္ Migrant-Stem Academy (ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Stem အကယ္ဒမီ) ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတို႔၏ DPS MEP ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမွ တဆင့္ စာရင္းသြင္းႏိုင္သည္။ Colorado ျပည္နယ္၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ျခံဳငံုမႈကို ၾကည့္ပါ။
Colorado ပညာေရး႒ာန »
Colorado အလုပ္သမား ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဌာန »
Colorado Farm Workers (Colorado လယ္ယာလုပ္သားမ်ား) »
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ပညာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား »
National Center for Farm Worker Health (လယ္ယာလုပ္သားက်န္းမာေရး အတြက္ အမ်ိဳးသားစင္တာ) »
ပိုးသတ္ေဆး အစီရင္ခံစာ »
United Farm Workers of America (အေမရိကန္ လယ္ယာလုပ္သားမ်ား အစည္းအရံုး) »
အာဖရိကန္ အသိုင္းအဝိုင္းစင္တာ »
Denver ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္ »
Denver တကၠသိုလ္ ဒုကၡသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား »
စီမံကိန္း Worthmore »
တိုးတက္ႀကီးပြားေရး စင္တာ »
အဆက္အသြယ္ ႏွင့္ တည္ေနရာမ်ား
ၿမိဳ႕ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ပညာေရး အစီအစဥ္ရံုး
Colorado ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ပညာေရး အစီအစဥ္
Muhájer or Taalim Program
Program ibár baabote
The Migrant Education Program (Muhájer or Taalim Program - MEP) óiyedé oggúa wotóni program zibá ré bana giyé muhájer cací hammwa ókkol ór fuwain dór háas hájot ókkol óre fura goríbólla. 1965 or Lamar Tobka adde Mazór Tobkar Taalim Kaanun or Dárá I or ekkán tobdilir zoriya 1966 ot mazé Program gúa ré bená goijjé. Ibá ye battí taalimi adde modoti hédmot ókkol zuhar goré.
Usíla Ókkol »
Muhájer fémili ókkol óre foriso gorá, bórtti gorá adde modot gorá, eén hédmot ókkol zuhar goríyore ziín é hítáraré hazebaze mowka de hítárar taalimi moksúd ókkol háasel goríbólla.
Program gúa ye ki zuhar goré?
Foriso gorá giyyé dé eskuilla fuwa ókkol ór gonti adde hítárar hájot ókkol ór buniyad or wore ek eskul yá dectík óttu oinno gán ot hédmot ókkol alog alog óitfare. Córácori hédmot ókkol ót lamar gún cáamel asé, lékin híin or wore mahádud noó:
Hánár gudam ókkol, hoor or gudam ókkol, hom-hóros elaji hédmot ókkol adde kiliník ókkol, GED kelás ókkol, decóttayir kelás ókkol, baaleg or taalim, kaanuni hédmot ókkol adde oinno sómáji tonzim ókkol ór hañsé háwála gorá.
Fúdínna eskul or dahéla adde sóbók forá loi modot diya.
Dui-decí Program or zoriya Mexico loi eskuilla fuwar balang ókkol anániza gorá.
Kabel muhájer eskuilla fuwa ókkol ólla eskolarcíp or modot.
Juwan or raábári adde taalimi modot.
Fonná forár battí hédmot ókkol
Talluk adde Zaga Ókkol »
Kodom 1: Eskuilla Fuwa yáto fémili gúa lamar hókdarir córók ókkol ór muwafék ór né talac gorá
Muhájer eskuilla fuwain óiye dé oi maabaf yáto walidar ókkol ór gura fuwain (zonom loti 21 bosór fujjonto) zetárá esteit yáto eskul dectík ókkol ekkán óttu oinno ekkán ot gelde tin bosór or bútóre zehonó woktót lorasora goijjé, taáke két-cac, mas dóra, yáto hé mutallek harhána ókkol ót toitta yáto muúsómi soori saibólla yáto faibar niyot loi.
Fuwain hókdar bonibó zodiyó hítárar maabaf ókkol é ham noófa zián hítára tuwaíl yáto hítára héñtte loti ham ókkol bodoillé. Fémili ókkol maana battí taalimi hédmot ókkol ór hókdar bonitfare, lamar hazhormo ókkol ót hítárar agor ham or wore darmudar gorí:
Totorhari, gulagala, danaduna (thoin bórá adde pek gorá cóo)
Fárom, sorani (dud adde kér or ham cóo)
Gusso pek gorár harhána, zoba gór
Kurá fala, andhar harhána
Sarani gór, sara besooni
Dud ór fárom ókkol
Christmas gas karuai, jongol
Akhéri laayek banoinna hórkot óttu cúru gorí eskuilla fuwa ókkol tin bosór ólla hókdar bonibó. Zetobar fémili gúwa cac-két ot ekkán ham ollá eskul dectík ór címar baáre laribó, fuwain gún fítin hókdar bonibó.
Kodom 2: Oggúa eskuilla fuwa yáto fémili ré foriso gorá yá bórtti gorá
DPS ot ek fémili ré MEP ollá foriso goríte, fórom yaán fura goró doftór ót yáto 303-365-5817 ot koól goró, eskuilla fuwa gúa hókdar óiye né saibólla. Eskuilla fuwa gúar kobul zehón fakka óizaibo, DPS ottú oggúa muhájer or talluk goróiya fémili gúar hañsé aibó hédmot ókkol dibollá ar eskuilla fuwar gúar rasta deháibólla.
Eskuilla fuwa gúar kobul zehón fakka óizaibo, DPS ottú oggúa muhájer or talluk goróiya fémili gúar hañsé aibó hédmot ókkol dibollá ar eskuilla fuwar gúar rasta deháibólla. DPS fémili ókkol óre góláza State of Colorado or Migrant Education Program (MEP) or torfóttu. Eçé asé MEP bórtti gorár wore ekkán aam nozor.
Federal Program Ókkol or Modoti Hédmot Ókkol or Fórom »
Eskuilla fuwa ókkol, maabaf ókkol adde fémili ókkol ólla asbab ókkol
Muhájer or taalim
Parent Advisory Council (PAC – Maabaf or Mocwara Kounsil) or ekzon sáñti binibólla maabaf ókkol óre basá zaifare. State of Colorado motafek eçé PAC or aam nozor asé.
Eskuilla Fuwar Wakiya Ókkol
Mowka ókkol ót cáamel asé: MYLI, SMYLI, Close Up (Decóttayir Taalim) ar Migrant-Stem Academy, ar eskuilla fuwa ókkol é doftór gorí faribó hítárar DPS MEP rabetar zoriya. Cek goró State of Colorado or muhájer or wakiya ókkol or aam nozor.
Maabaf ókkol keén gorí cáamel óibó
Colorado Taalim Dipármen »
Colorado Ham adde Soori Dipármen »
Colorado Farm Workers (Colorado Fárom or Hammwa Ókkol) »
Muhájer or Taalimi Asbab Ókkol »
National Center for Farm Worker Health (Fárom Hammwar Sehét or Kowmi Morkoz) »
Fuk Marar Repot »
United Farm Workers of America (Americar Ettehádi Fárom Hammwar Ókkol) »
Sómáji Tonzim Ókkol
Afríki Sómáji Morkoz »
Denver Umumi Kutub Háná »
Denver Jáamiya Rifújir Hédmot Ókkol »
Talluk adde Zaga Ókkol
(Metro Muhájer or Taalim Program Ofís)
(Clorado Muhájer or Taalim Program)
Migrant Education Program (ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ
ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (MEP) အံၤ မ့ၢ်ဝဲထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢအဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်သိးကတုၤထီၣ်ဘးဆူ ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးတၢ်ဖိ အဖိအလံၤ အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ 1996 ခီဖျိ တၢ်ဘျီဘၣ်က့ၤ Title I of the Elementary and Secondary Education Act of 1965 (1965 တီၤဖုၣ်ကၠိ ဒီးတီၤထီကၠိ တၢ်အိၣ်ယၢၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သဲစး) န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ဟ့ၣ်လီၤဝဲ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်မၤစၢၤ ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲအတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ ခံခါလၢာ်န့ၣ်လီၤ.
ပာ်ပနီၢ်, ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ ဒီးဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ် အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ခီဖျိ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလၢ အဟ့ၣ်ပျဲအဝဲသ့ၣ် ဒ်သိးကတုၤထီၣ်ဘးဆူ အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်ပညိၣ်ဖီတၢၣ် တုၤလီၤတီၤလီၤအဂီၢ်လီၤ.
တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကလီၤဆီလိာ်သး လၢကၠိတဖျၢၣ်ဘၣ်တဖျၢၣ် မ့တမ့ၢ် ကီၢ်ရ့ၣ်တဘ့ၣ်ဘၣ်တဘၣ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ကၠိဖိနီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤ ဒီးအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီိၤ. တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလိၤလိၤသ့ၣ်တဖၣ် ပၣ်ဃုာ် ဘၣ်ဆၣ်တၢ်တပာ်ပနီၣ်ဃာ်အီၤလၢအမ့ၢ် –
တၢ်ဆှၢခီဆူ တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်မၤစၢၤလီၢ်, တၢ်ကူတၢ်သိးတၢ်မၤစၢၤလီၢ်, ကသံၣ်ကသီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ ဒီးကသံၣ်ဒၢး လၢအဘူးအလဲစှၤ, GED တီၤတဖၣ်, တၢ်ဒိးစဲးမၤလိထံဖိကီၢ်ဖိ, ပှၤဒိၣ်တုာ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, သဲစးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ ဒီးပှၤတဝၢ ခၢၣ်စးကရၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်မၤစၢၤလၢ တၢ်ကိၢ်ခါတၢ်မၤလိအတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ ဒီးတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိ.
တၢ်ဆှၢခီကၠိဖိတၢ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါခံခီယၢၢ်ပာ် လၢ Mexico ခီဖျိ ထံကီၢ်ခံဘ့ၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ.
အပတီၢ် 1 – ကွၢ်ဃုသ့ၣ်ညါ မ့ၢ်ကၠိဖိ မ့တမ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် တုၤထီၣ်ဘးဆူ တၢ်ကြၢးတၢ်ဘၣ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢလာ်တဖၣ်အဂီၢ်.
ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဖိသၣ်တဖၣ် (အိၣ်ဖျဲၣ်တုၤ 21နံၣ်) လၢအမိၢ်အပၢ် မ့တမ့ၢ် အပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်ပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲလၢ ကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ဝံၤတဘ့ၣ် မ့တမ့ၢ် လၢကီၢ်ရ့ၣ်ကၠိတဖျၢၣ်ဝံၤတဖျၢၣ် လၢအပူၤကွံာ် သၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဒ်သိးကဃုာ်ဒိးန့ၢ် မ့တမ့ၢ် အဲၣ်ဒိးဒိးန့ၢ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤ တစိၢ်တလီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ အကတီၢ်ဒၣ်ဝဲ ဖဲတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျး, တၢ်မၤအီၣ်ညၣ် မ့တမ့ၢ် စဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤလီၢ် လၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဖိသၣ်အမိၢ်ပၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ အဝဲသ့ၣ်ဃုဒိးန့ၢ်ဝဲ မ့တမ့ၢ် အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ဆီတလဲ တၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်, အကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲသ့န့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး ကူၣ်သ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ လၢအပူၤကွံာ် လၢလာ်အံၤန့ၣ်လီၤ –
တၢ်ဒိးတၢ်လၣ်/တၤသူတၤသၣ်/တၢ်ချံတၢ်သၣ် (ဃုာ်ဒီးတၢ်ထၢနုာ်လီၤတၢ်ဆူထးဝါဒၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိၣ်တၢ်စှၢၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ)
Greenhouse/Nursery (ဟံၣ် လၢပှၤ ဘှီလၢမဲာ် ထံကလၤလၢကသူၣ် တၢ် အဂီၢ် /တၢ်သူၣ်သ့ၣ်ဖိဝၣ်ဖိအလီၢ်)
Dairy Farms (တၢ်ဘုၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိဒီးထုးထီၣ်တၢ်နုၢ်ထံအလီၢ်)
စးထီၣ်လၢ တၢ်သုးထီၣ်လၢအကြၢးအဘၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ကၠိဖိတဖၣ် ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ လၢ သၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်မ့ၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲလၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ကၠိတဘျီလၢ်လၢ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဖဲတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးအလီၢ်န့ၣ်, ဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ က့ၤကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.
တၢ်အိၣ်ယၢၤလၢ ကၠိဖိတဖၣ်, မိၢ်ပၢ်တဖၣ်, ဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်
မိၢ်ပၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဆှၢနုာ်အီၤလၢ ကကဲထီၣ် Parent Advisory Council (မိၢ်ပၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးပှၤကူၣ်လိာ်တၢ်ကရၢ)ဖိ မ့တမ့ၢ် PAC သ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲ PAC တၢ်ပာ်ထံနီၤဖး ခီဖျိ Colorado ကီၢ်စဲၣ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး – MYLI, SMYLI, Close Up ဒီး Migrant-Stem Academy (ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်– Stem အခဲၣ်ဒမံၣ်), ဒီး ကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်ဆဲးလီၤအမံၤသ့ ခီဖျိ အ DPS MEP ပှၤရ့လိာ်မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. သမံသမိးကွၢ် Colorado ကီၢ်စဲၣ် တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးလၢ ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အမူးတဖၣ်တက့ၢ်.
Colorado ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤ »
Colorado ပှၤမၤတၢ်ဖိ ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤဝဲၤကျိၤ »
Colorado Farm Workers (Colorado စံာ်ပှဲၤအပှၤမၤတၢ်ဖိ) »
ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ် »
National Center for Farm Worker Health(ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤလီၢ်ခၢၣ်သး လၢပှၤမၤစံာ်ပှဲၤဖိဆူၣ်ချ့အဂီၢ်) »
United Farm Workers of America (America ပှၤမၤစံာ်ပှဲၤဖိကရၢ) »
African Community Center (African ပှၤတဝၢ လီၢ်ခၢၣ်သး) »
Denver ကမျၢၢ်လံာ်ရိဒၢး »
Denver University Refugee Services (Denver ဖၠၣ်စိမိၤ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလီၢ်) »
Metro Migrant Education Program Office (Metro ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ကူၣ်သ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ)
Colorado Migrant Education Program (Colorado ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ကူၣ်သ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ)